घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू रोबिन वैन फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। 'फ्लाइंग डचमैन'। हाम्रो रोबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन, र उनको बारेमा धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको प्रमुख लेग इतिहासको बारे जान्दछ तर केहीले रोबिन वान फारसीको जीवनीलाई विचार गरे जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
रोबिन वान पेरिस को एक्सटेन्सन6को 1983th दिन, नीदरल्याण्ड, रोटरडैम मा पैदा भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, जोसेस रस वान फारसी र बुबा जन्मे बॉब वान फारसीमा जन्मनुभएको थियो। दुवै बच्चा आमाबाबुले बिहे गरेकी थिइन्।
रोबिन एक कलात्मक परिवारबाट आउँछ। जोसेस रस, उनको आमा, चित्रकार र आभूषण डिजाइनर हुन्। उनले पनि विशेष आवश्यकताहरु बच्चाहरु सिकाउँछन्। बब, उनको बुबा एक पेशेवर मूर्तिकला हो।
रोटरडैममा बढ्दै गर्दा, वान फारसीलाई "युवा समस्या wहेलो शुक्रबार"। भ्यान फारसीको आमाबाबुले बिहे गरेपछि उनको बाबुले ल्याएको थियो।
स्कूलमा भ्यान पर्सी सबैभन्दा खराब व्यक्तिहरूमध्ये एक थियो। उहाँ लगभग कक्षाबाट बाहिर निस्कनुभयो। वास्तवमा, उनी कहिल्यै शैक्षिक प्रकार कहिल्यै थिएनन्। उहाँका शिक्षिकाहरूले उनलाई सधैं भन्थे ...: "रोबिन, आफ्नो होमवर्क गर, यो महत्वपूर्ण छ तपाईंको डिपोमा छ"। तर, जवान रोबिनले आफ्ना प्रशंसकहरूबाट अन्य आवाज सुने"तपाईं जोहान क्रुफ जस्तै हुन जाँदै हुनुहुन्छ"। यसले तिनका शिक्षिकाहरूसँग दु: खी छोड्यो रौतहट, जो शैक्षिक प्रति तिर कुल असंतुलन देखियो।
उनको पिता आफैले आफ्नो छोराको व्यवहारको बारे चिन्तित भएन। हामी तपाइँलाई किन भन्छौं! रोब वान फ्रिसले फुटबललाई बुझेको थियो उनको जन्म अघि उनको छोराको बुलायो। उसले भन्यो, "पनि तिमि haउनीहरूको भाग्य पूरा भएको थियो। "
रोबिन पनि फुटबलको लागि आफ्नो जुनूनको कारण प्रवेश गरे भन्दा पनि अधिक समस्याबाट बाहिर राखिएको थियो। 1997 देखि 1999 सम्म, उहाँले युवाहरूको रूपमा एक्सेल्सियर खेल्नुभयो। एक्सेल्सियरको दर्शन स्ट्रीट फुटबलको पुनरुत्थान थियो। तिनीहरूले बच्चाहरूलाई धेरै अधिक हस्तक्षेप बिना खेल्न अनुमति दिए
भान्सा संलग्न गर्ने क्लब भ्यान फारसीको दायाँ पैर र शीर्षकमा कडा मेहनती भयो। क्र्रालिङको सडकमा खेल्न आवश्यक कौशलहरू पोषण गर्दै, पूर्वी रोटरडैममा बहु-सांस्कृतिक पड़ोसी जहाँ उनी हुन्थे र उनीहरूका पिता अझै पनि जीवित छन्।
रोबिन क्लबमा धेरै लोकप्रिय थिए किनभने उनी आफ्नो उच्चतम युवा श्रेणीमा उभिए। निर्देशकहरु को एक्सेलियरियर बोर्ड को उनको एक्सएनएमएक्सएक्स-क्षमता स्टेडियम, रटरडैम मा वाउडस्टाइन मा उनको पछि खडे नाम थियो।
रोबिन वान फारसीको नाममा एक्सेल्सियरको एक नाम खडा छ
11 उमेर देखि, रबिनले उनको पितालाई जो मर्ने-कडा शस्त्रागार फ्यान हो भन्ने सबैलाई धन्यवाद दिए। तल उनको तस्वीर हो।
Robin वैन Persie, JVC ईरा मा एक शस्त्रागार समर्थक
13 को उमेर मा, वान फारसी आफ्नो देश मा स्टारम को लागि टिप गरिएको थियो र पर्यवेक्षकहरु उसलाई उनको हल्याण्ड को लीजेंड जोहान क्रुफ को समान बनाएर जारी राखयो। यसले खेलको लागि थप जुनून ल्यायो किनभने उनले आफ्नो कपाललाई बल जस्तै देख्न लगाए।
युवा रोबिनले आफ्नो कपाल फुटबलमा राख्छ
प्रतिभाशाली डचम्यानले आफ्नो सपना पछ्याउन 13 को उमेरमा होल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो क्लब फेइनेनेर्ड संग सामेल भएको थियो, तर उनी आफैले आफैं भन्दा खराब दुश्मन बने। क्षेत्र मा उनको प्रदर्शन को कमी देखि दूर थियो। त्यसोभए, उनको विपरित अहंकार र स्वार्थीले उसको कौशल छाडे। वान फारसीले 20 फर्केपछि फेईनेनोर्डले उनलाई छुट्याए।
क्लब छोड्न पछि, रोबिनले आफ्नो उत्कृष्ट कौशललाई क्र्राडिङको सडकमा जारी राखेको ठिक अदालतमा उच्च तार बाडको रूपमा चिनिन्छ। 'पिंजरा।'
अचानक उनको श्वासमा श्वासन भयो किनभने उनी अचानक एक खेलाडीको आर्सेल्यान्ड स्काउटको पहिलो छनोट बनेका थिए जसले बरुकोम्पपलाई प्रस्थान गरेपछि। वान फारसीलाई दोस्रो स्ट्राइकर माथिको रूपमा हेनरीको साथ खेल्ने एक सुरूवात भूमिका दिइएको थियो।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
रोबिन वान फारसी एक पत्नीको छनौट अझै पनि आफ्नो प्रशंसकहरु लाई पराजित गर्दछ। उनी हाल मोरक्को सुन्दरता, बोौचर एल्बलीलाई विवाहित छन्।
रबिन वान फारसी र पत्नी-बोौचर एल्बली
यस जोडीले दुई सुन्दर बच्चाहरू छन्, शाकेल र छोरी डना नामक एक छोरा। तल तिनीहरूका तस्वीरहरू उनीहरूको माममा छन्।
बुउचर एल्बब्बा वान फारसी आफ्नो बच्चाहरु संग
जस्तै एंथोनी मार्शल र फिलिप Coutinho, रोबिन वान फारसीले 20 को शुरुआती उमेर मा विवाह गरे। यद्यपि बुउचर वे फारसी र उनको पति, फुटबल स्टार रोबिन वैन फारसीबलात्कार आरोपको कारणले उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा चट्टान सुरु भएको थियो (तलका विवरणहरू)। उनीहरूलाई मात्र एक वर्षको लागि विवाहित भएको थियो, र बोउचरले एक पटक आफ्नो नयाँ पतिलाई त्यागे। तथापि, उनले यो फिक्री गरे र अब जोडे को हृदय को दुखाइ देखि उत्तेजित भएको थियो।
आफ्नो पत्नी को हेरचाह एक मुस्लिम हो, एक पल्ट एक रोबिन ले भन्यो कि पत्रकार ले यदि उनलाई इस्लाम को परिवर्तित गर्न को कारण छ, वान Persie भन्यो, ...
"यो सत्य होइन। म मुस्लिम होइन, न त एक ईसाई वा यहूदी। म उदार रूपमा उठाएको छु। यदि तपाइँ एक मुस्लिम बन्न चाहनुहुन्छ भने यो हृदयबाटै आउनुपर्छ। म यो केवल मेरी पत्नीलाई खुसी पार्न सक्दिन। मेरो विश्वास गर्न एक असल मानिस हुनुको खोजी हो। "
बुउचर वे फारसी एक संगीतकार पनि हो र डचमा गीत गाईन्छ।
त्यो फुटबलमा आफ्नो उपलब्धि को मामला मा उनको पति को धेरै गर्व छ। उनको चहचहाना पृष्ठ आफ्नो पतिको प्रशंसा गर्ने पोष्टहरू भरिएको छ।
जब उहाँ शस्त्रागार हुनुहुन्थ्यो, बोौचरलाई मिररद्वारा साक्षात्कार गरिएको थियो। उनले भनिन्, "एक राम्रो कप्तान शस्त्रागार को बारे मा चिंतित हुनु पर्छ, टीम को बारे मा, सबै शस्त्रागार को बारे मा। ओह, र बीचमा, मलाई 'छोड्ने पत्नी' को प्रोमोटेड गरिएको छ। "
उनको प्रोफाइल पेज मा, त्यो आफु को वर्णन को रूप मा, "दुई सुन्दर बच्चाहरूको माम र गर्व गर्भवती श्रीमतीको अनुहार।" वान फारसीले गनरको रूपमा आफ्ना दिनहरूमा 'दडी आर्सेसन' भनिन्, तिनको छोराले युनाइटेड गत गर्मीको बिचमा स्विच गरेपछि केही समस्या देखाए।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रोइङ बच्चा
रोबिन वान फ्रिसको टर्की क्लब फेनबर्से एक पटकको लागि भुक्तानी गरे म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान, लुई हीम, ओल्ड ट्रेफर्डबाट डचम्यानको निकासको खबरमा रोइरहेका युवा भिडियोको पछि उनको इस्तांबुल उडान गर्न वायरल चलायो। तल एक फोटो सबूत छ।
लिटिल लुई डायम्यान रोबिन वान फारसीको लागि रोइरहेका छन्
डायमरेको आमाबाबुले फिलिम गरेको भिडियो, फेनबरास समर्थकहरूको ध्यानमा आउन थाल्यो जसले शुरू गरे $ 2000 (£ 1,281) उडान गर्न अनलाइन अभियान जुलाईमा लुइसले आफ्नो मूर्ति संग पुनर्मिलन गर्ने मौका पाए।
क्लिपले फेनबरास राष्ट्रपति अजीज यिल्डिरिमलाई आफ्नो बाटो भेट्टाएपछि उनले डायमण्ड परिवारलाई टर्कीमा निम्तो दिन निर्णय गरे। Yildirim को निमन्त्रणा स्वीकार गरियो र उनि बिहीबार इस्तांबुलमा फेनबरास टिभी चालक दलले स्वागत गरे। एक फेनबरास बोर्ड सदस्य एलान एक्क्सोगोलको रूपमा उनीहरूलाई फेरि फेरि चिन्ता गरिएको थियो, स्टोरमा अर्को आश्चर्य थियो। उनले परिवारलाई एक गर्मीको छुट्टी मनाउने ठाउँ अन्टाल्यामा पाँच दिनको छुट्टीमा राखे।
"हामी यो बनाउने बनाउनका लागि फिनेराहस र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी हेर्नको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं रोबिन वैन फारसी खेल्नु," इस्तांबुलमा आए डायमण्डको बुबा सैमले भने।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
रोबिन वैन फारसी फुटबल लगानी उनको र उनको परिवारको लागि भुक्तानी गर्नु अघि मध्य-स्तरीय डच परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउँछ। यहाँ, हामी तपाईंलाई आफ्नो पिता, आरओबी वान फारसी संग शुरू हुने उनको पारिवारिक जीवन को विवरण प्रदान गर्दछौं।
रोबिन वैन फारसीको बुबा- रोब व फारसी
फेथर: BOB वैन Persie एक व्यक्ति हो जसले भविष्यवाणीहरूमा विश्वास गर्छ। उनले दावा गरेका थिए कि वान फ्रेरि जन्मेको थियो, एक क्लियरभाइन्टले तिनलाई यसो भनेका थिए कि उनको छोरा कसरी प्राप्त गर्न सक्नेछ: "उनले मलाई बताए कि स्कूल उनको रुचि थिएन तर, जब खेलमा आए, त्यो क्षेत्र मा एक राजा र फरिरी हुनेछ। त्यो त्यो डच राष्ट्रिय टोलीमा हुनेछ " BOB ले भन्यो Manchester Evening News Report.
बब वैन फारसी एक मरे-कडा शस्त्रागार प्रशंसक हो। अमीरात स्टेडियम भित्र तिनको मूर्तिकला कलाकृतिको टुक्रा छ जुन उनले पुरानो आर्सेसनल म्यागजिनबाट बनाएको थियो। बुबा र छोरा दुवै धेरै नजिक हुन लागे।
एक छोरा-बुबा प्रेम- रोबिन वान फारसी र बुबा, रोब
मातृभाषा: तल चित्रित जोसेस रस वान फारसी लेजेन्डरी वान फारसी को प्यारी आमा हो।
रोबिन वैन फारसी- जोसेस रस वान फारसी
उनी एक पटक उनको छोराको आर्सेल्यान्डमा बस्न पापीमा सामेल भए। उनको शब्दहरुमा ..."जब हामी शस्त्रागार जान्छौं र हामी उहाँसँग स्टेडियममा हिँड्छौं, यो विद्युतीय छ। मामको रूपमा, यसले मलाई घमण्ड गर्दछ। यो साँच्चिकै सुन्दर छ। जब रोबिनको भदौ, मेरो बुबा अमीरातमा उनको (91st) जन्मदिनको लागि थियो र हामी भित्रका तस्विरहरू लिइरहेका थियौँ, मैले मेरो पछि बढेको मान्छे भन्छिन्: 'हामी रोबिनलाई माया गर्छौं।' ममको रूपमा, म राम्रो कुराको लागि चाहन सक्दिन। "
SISTERS: किकी र लिली वान पर्सी रबिन वान फारसीको दुई बहिनीहरू छन्। भाग्य-भित्रीले आफ्ना पिता, रोबलाई भने कि उसले तीन छोराछोरीहरू, पहिलो दुई छोरीहरू र त्यसपछि छोरा जन्माए। यो किकी र लिली थियो जुन पहिलो र दोस्रो थियो रोबिन तेस्रो भए।
रोबिन वान फ्रिसकी बहिनी - किकी र लिली वान पर्सी
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बलात्कार आरोप
यद्यपि, 2005 मा, वान फारसी को गिरफ्तार गरियो बलात्कारको संदेहमा। यो एक नाइट क्लब पोल नर्तकी पछि भयो भने उनले आक्रमण गरे र उनको बलात्कार गरे। रोबिन वान फ्रिसले पट्टेको साथ होटल कोठामा चेक गर्न भर्ती गरे तर बलात्कार गरेन भनेर अस्वीकार गरे।
यो घटना रोटरडैमको टुलिप इनमा भएको थियो, केवल 200 गजल जहाँ देखि उनको पत्नी बोउचर सुतिरहेका थिए। यो एक समय थियो जब उनले आफ्नो क्यारियर को सबै भन्दा कम अंक साझा गरे।
यो पनि पहिलो वर्ष थियो जुन उनी नीदरल्याण्ड राष्ट्रिय टोलीको भागमा चुनेका छन। बलात्कारको घटना एक वर्षपछि 2004 मा बूट्रासँग विवाह भयो।
डच अधिकारीहरूले चीजहरू सजिलो मानेनन्। भान पर्सीलाई2हप्ता जेल भइसके पछि न्यायाधीश गरियो। यसपछि चार्जर्सलाई खारेज गरियो जब अधिकारीहरूले उक्त कामलाई सहमति जनाए।
परिस्थितिले उनीहरु दुवैको मूल्य तिर्छन् विवाह र उनको क्यारियर, तर फुटबलको खराब केटाले अन्तमा पर्याप्त पर्याप्त निर्णय गर्यो, आफ्नो पत्नी, साथीहरू र कोच तिर आफ्नो रवैया सिधै।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
रोबिन वैन फारसीसँग उनको व्यक्तित्वको निम्न विशेषताहरू छन्।
शक्ति: क्रिएटिव, भावुक, उदार, गहिरो-मनपर्दो, उत्साहित, हास्य
कमजोरीहरू: बेथेलल, अविश्वसनीय, घमण्डी, जिद्दी र आत्म-केन्द्रित।
कुन RVP मनपर्छ: थियेटर, छुट्टिहरू, महंगी चीजहरू र साथीहरूसँग रमाइरहेका छन्
कुन RVP मन नपरेको छ: बेवास्ता गरिरहेको छैन, अगाडि बढ्न सजिलो वास्तविकता सामना गर्दै, राजा वा रानी जस्तै व्यवहार गरेन।
प्रेरणाको स्रोत: उनले आफ्नो क्यारियरमा प्रमुख प्रभावहरूको रूपमा थियरिरी हेनरी, डेनिस बर्गकम्प र मार्को वान बस्टनलाई स्थान दिन्छन्।
सबै भन्दा माथि, रोबिन्सन एक-अर्का खेलाडी हुन्। उहाँ डार्ट्स र टेनिसको प्रशंसक हुनुहुन्छ। यसमा टेबल टेनिस को लागि एक विशेष प्रतिभा छ। उहाँ क्लासिक अल प्याकिनो ग्याङ्गस्टर फिल्म स्फेसेसको प्रशंसक हुनुहुन्छ।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -परिवारको मृत्यु
जब यो वान फारसीले आफ्नो प्रिमियर लिगको लागि लन्डनको टोलीलाई छोडेर घोषणा गरेको थियो, धेरैले आफ्नी पत्नीलाई सुन डाइगर को लागी दोष लगाए।
One tweet was, "म तिमीलाई मृत्यु गर्छु। म तिमीलाई घृणा गर्छु, तपाईलाई अचम्म लाग्दछ। मलाई आशा छ कि तपाईंको सम्पूर्ण परिवार मरेको छ। "
यो पहिलो पटक रोबिनले आक्रमणको धम्की सामना गरेको छैन। आफ्नो जवान दिनहरूमा, रोबिन र तिनका सबै भन्दा राम्रो साथी, जर्ज अ्युनाले आर्च-प्रतिद्वंद्वी अज्याक्सबाट गुलियोले आक्रमण गरे। जर्ज अकुना हेड, गर्दन र रिब चोटको साथ अस्पतालमा लगाइएको थियो। युवा वान फ्रिसले यस हदसम्म पीटा हुनबाट बचाउन भाग्यशाली थिए।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उनको उपनाम पछिको कारण
13 जुन 2014 मा, हल्याण्डले विश्व चैंपियन स्पेनलाई अपमानजनक 5-1 हराउनेलाई पराजित गर्यो। पछि लागेका दिनहरूमा, चित्रवाहक समाचारपत्रहरू, सोशल मिडिया र टिभि च्यानलहरू थिए रोबिन वैन फारसी निलम्बित मध्य-उडान। यसले आफ्नो उपनामलाई बढायो "फ्लाइङ्ग डच मैन".
रोबिन वान फारसी- उडान डचमेन
उनको उडान सही बिरुद्ध भयो जब उनले इकर क्यासिलिलाई हराए र डच स्कोरिंग मसला खोलिन्।
यो एथलेटिकवादको उत्कृष्ट भव्य थियो जसले परिणामस्वरूप विश्व कप इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ट लक्ष्यहरू। आधुनिक दिन फुटबलमा सबैभन्दा ठूलो ह्यान्डशकले आफ्नो गोल पछि पछि लागेका थिए।
एक-एक-प्रकारको लक्ष्य उत्सव मालिकसँग हस्तक्षेप गर्नुहोस् वैन गल
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कसरी मान्छे यू उहाँलाई साइन इन गर्न असफल भयो
युएनले वान पर्सीलाई 2001 मा फिर्ता हस्ताक्षर गर्न सक्थे जब सर एलेक्स फर्गुसनले मुख्य स्काउट जिम रयानलाई पठाएको थियो - उनलाई केवल किशोरीलाई पठाउन को लागी। "रोबिन मात्र समयमा 16 वा 17 थियो," फ्रर्गुसनले भन्यो।
त्यसपछि- मैनचेस्टर युनाइटेड मेनेजरले आफ्नो स्कोउट जिम रोबिनलाई देखाएको एक शानदार प्रतिभा थियो। तर 16 वर्षको लागि त्यो सानो अशुद्ध थियो कि महसुस भयो। वास्तवमा, तिनले दिन जिममा रातो कार्ड पाएका थिए स्टेडियममा उनलाई हेर्न। फर्जी पछि पछि आर्सेनलले मौका पाएपछि लामो समयसम्म उनलाई खरीद नदिएको।
रबिन वान फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -किन उनले संयुक्त राष्ट्रको लागि शर्ट नम्बर 20 लगाए
उनीहरूको संख्या 20 वा 21 पहिरन गर्ने छनोट थियो जब उसले पहिले मैनचेस्टर युनाइटेडमा जान्यो। रोबिन वान फ्रिसको शब्दहरूमा ..."मैले यो शर्ट लिने कारण हो कि हामी सबै यहाँ यस वर्ष चैंपियन हुन चाहन्छौं र यसको अर्थ मैनचेस्टर युनाइटेडको लागि 20th लीग शीर्षक हो। यो 20 लिने मुख्य कारण हो, " उनले समयको वर्णन गरे। तथ्य जाँच गर्नुहोस्: रोबिन वान फारसीको बचपन स्टोरी प्लस अनगिन्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।